UKaspersky uphehlelela i-antivirus yasimahla yeWindows | Iindaba zeGajethi
Besiva amashumi eminyaka malunga nesidingo khusela iikhompyuter zethu (kwaye kamva kunye nee-smartphones zethu kunye neepilisi) ngokuchasene nezisongelo ezahlukeneyo ezinje nge-spyware, ii-virus, i-malware kunye nezinye izinto ezisandula ukwenzeka, i-ransomware, isenzo "esixhwila" ikhompyuter yakho kwaye sikushiye ngaphandle kwefayile enye ngaphandle kokuba uhlawule intlawulelo, nangona kungekho nto iqinisekisa ukuba ngokuhlawula uza kubuya nezinto zakho.
Ke, kuyo yonke le minyaka, uninzi lwe-antivirus yeeWindows ziye zanda, uninzi lwazo luhlawulelwe, abanye bakhululekile, abanye bavela nakwiimpawu ezaziwayo. Kwaye ngoku, iKaspersky Lab yongeza koku ngokushiya, ngokuyinxenye, imodeli yayo yeshishini (ukhuseleko ekuhlawuleni) ukumilisela iantivirus yasimahla yeWindows ekuthiwa yi KaSpersky Simahla.
1 IKaspersky yasimahla, inkululeko yasimahla kunye nenqatyisiweyo yokukhuselwa kwiLebhu yaseKaspersky
2 Ngoba ngoku
IKaspersky yasimahla, inkululeko yasimahla kunye nenqatyisiweyo yokukhuselwa kwiLebhu yaseKaspersky
Isimahla seKaspersky yiyo Uhlobo olukhululekileyo kunye nolunqunyelwe Enye ye-antivirus eyaziwayo neyaziwayo yeWindows esele ikhona iminyaka, ukhetho olukhulu olunesiqinisekiso sokuba sele sinika iwonga leKaspersky Lab, kwaye inokuba luncedo kakhulu kwabo basebenzisi be-dimist abangasindisi ilizwe Iimfihlo kwikhompyuter yakho, kodwa kwangaxeshanye ufuna kwaye kufuneka unokhuseleko lokuba idatha yakho, iifayile kunye nabanye zikhuselekile.
Kodwa i-antivirus yasimahla eyasungulwa nguKaspersky ayisiyowo wonke umntu kuba, njengoko besesitshilo, yinto u "khanyisa" uguqulelo lwenkulumbuso yeyiphi, ewe kuya kufuneka ungene ebhokisini.
I-Kaspersky yasimahla iya kwenza uvavanyo olupheleleyo lwekhompyuter yethu, iya kuskena ikhompyuter yazo zonke iintlobo ze-malware ngelixa isikhusela kwiifayile ezinobungozi ezinxulunyaniswa namaphepha ewebhu okanye izinamathiselo ezifunyenwe kwi-imeyile; Ngale nguqulo yasimahla siyakukhusela nakwiinkonzo zemiyalezo yethutyana kwaye, ewe, uhlaziyo oluzenzekelayo. Njengoko besitshilo, eli nqanaba lokhuseleko olusisiseko lanele uninzi lwabasebenzisi basekhaya okanye "abaqhelekileyo". Into ongazukuyifumana nayo iya kuba yimisebenzi kunye neempawu ezinje ngolawulo lwabazali, ukhuseleko lwentlawulo kwi-Intanethi, iVPN kunye nokunye, zonke ziyafumaneka emva kwendlela yokubhalisela ejikeleze amashumi amahlanu eedola.
I-Kaspersky yasimahla yisoftware entsha ye-antivirus yeWindows ekhutshwe yi-Kapersky Labs ngokupheleleyo ngaphandle kwentlawulo, nangona inemisebenzi ethintelwe kwinqanaba lokhuselo
Olu khuselo ngokusekwe kwiziko ledatha elihlaziywa rhoqo ukuze ibe nokufumana izoyikiso ezifanelekileyo, kodwa gcinani engqondweni ukuba i-antivirus, akukho namnye kubo, ongenakuphazama. Kufana "nomhlophe oluma umsila", abahlaseli abakhohlakeleyo bahlala inyathelo elinye phambili kodwa ukuba neendlela zokhuselo zolu hlobo sesona sixhobo sinaso.
Ukuba uyafuna, unga khuphela i-Kaspersky yasimahla kwiwebhusayithi esemthethweni, kodwa gcinani engqondweni ukuba, okwangoku, uya kufumana yonke into ngesiNgesi esingqongqo, iphepha kunye nesoftware uqobo.
Akunzima ukuqonda ukuba kutheni uKaspersky ekugqibeleni ekhuphe isoftware yakhe emva kwamashumi eminyaka yokuncamathela kwimodeli yeshishini ehlawulelweyo. Iingcali zithi ayisiyonto yokuba uzive usoyikwa yenye iantivirus ezimeleyo kunye nesimahla, kodwa into ebangela ukuba ibenguye "nguMkhuseli". Windows 10 yeza ne-Defender efakwe kwangaphambili, simahla simahla kwaye ngaphezulu kwayo yonke into, kuye kwavela ukuba kuyasebenza kwaye, ngokusengqiqweni, ezi ayizondaba zimnandi kuKapersky kunye nezinye iinkampani ze-antivirus ezihlawulelwayo. Ngapha koko, kwenzeka ngexesha apho inkampani ityholwa ngokuba dikidiki ngokunxulumene nokuhlola kunye nokuqhekeza izinto kurhulumente waseRussia eMelika, ke ayisiyongxaki yokuba kulapho kukhutshwa khona iKaspersky Free.
Nangona uKaspersky engazukusebenzisa ezi nguqulelo zasimahla, sele ichazile into oza kuyiphumelela: isabelo sentengiso kunye nedatha. Ngapha koko, kuvavanyo olunye lweenwele eRashiya, eUkraine nakwezinye iindawo zaseBelarus, isabelo sabo sentengiso sikhuphukile ukusuka kwiqanda ukuya kwizigidi. Y Ngabasebenzisi abaninzi kwihlabathi liphela, uKaspersky uya kuba nedatha eninzi anokuyisebenzisa ukuphucula inkqubo yokufunda komatshini, kwaye ngubani owaziyo enye into. Ke khumbula, "Xa imveliso isimahla, imveliso nguwe".
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » UKaspersky uphehlelela i-antivirus yasimahla yeWindows